अर्को साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार : एकीकृत समाजवादीबाट को–को बन्दै छन् मन्त्री ? – Butwal 24 News
September 17, 2021 Butwal 24 NewsLeaveaComment on अर्को साता मन्त्रिपरिषद् विस्तार : एकीकृत समाजवादीबाट को–को बन्दै छन् मन्त्री ?
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनेको दुई महिना पुगिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । देउवा नेतृत्वको सरकार अझै केही दिन विस्तार नहुने सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन् ।
सत्ता गठबन्धनको महत्त्वपूर्ण घटक नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि अझै हप्ता दिन लाग्नसक्ने बताएका छन् । शुक्रबार नयाँ बानेश्वरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यालयको उद्घाटनपछि अध्यक्ष नेपालले आउँदो साताभित्र मन्त्रिपरिषदुले पूर्णता पाउने सक्ने संकेत गरे ।
यही असोज ४ गते संसद् बैठक र असोज ५ गते आफ्नो पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्ने भएकाले त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् विस्ता हुने उनको भनाइ छ । “आज हो भने आज, भोलि भने भोलि सरकारमा जान तयार छौँ,” अध्यक्ष नेपालले भने, “प्रधानमन्त्री भएको भए ठ्याक्कै भनिहाल्थेँ । आशा गरौँ, यो साताभित्र हुनेछ ।”को–को बन्दै छन् मन्त्री ?
नेकपा (एस)का नेता खतिवडा त आफ्नो पार्टी कुनै पनि बेला सरकारमा जान तयार रहेको र को–को मन्त्री हुने भनेर पनि टुंगो लागिसकेको दाबी गर्छन् । यद्यपि, उनले मन्त्री हुनेहरूको नामबारे खुलाउन चाहेनन् । नेता खतिवडाका अनुसार मन्त्री बन्नका लागि मापदण्ड भने बनिसकेको छ ।
“सबै प्रदेशबाट समेटेर मन्त्री बनाइनेछ । दुई–तीनपटक सांसद भइसकेकाहरू स्वतः मन्त्री बन्नेछन्,” मापदण्डबारे खतिवडाले भने, “महिला, भूगोल, सिनियर नेता समेटिनेछन् ।”
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)कै अर्का नेताका अनुसार मन्त्री बन्ने विषयमा पार्टीभित्र विवाद पनि छ । केही सांसदहरूलाई मनाउने कोसिस भइरहेको ती नेताको भनाइ छ ।
“मन्त्रीका दाबेदार आठ/नौजना हुनुहुन्छ । जम्मा पाँच/छ मन्त्रालय पाइन्छ । हामीलाई पनि केही नेतालाई सम्झाइबुझाइ गर्नका लागि समय चाहिएको छ,” ती नेताले भने, “कांग्रेसभित्र पनि समस्या छँदै छ । कसैलाई सचेतक बनाएर राख्नुपर्‍यो । पद व्यवस्थापनका लागि मनाउने काम भइरहेको छ ।”
उनका अनुसार पार्टीको मापदण्डमा सांसदहरू भवानी खापुङ, विरोध खतिवडा, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ तथा पछिल्लोपटक नेपाललाई साथ दिएकाले प्रेम आले, कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसन) पनि मन्त्री बन्ने ‘लिस्ट’मा छन् । आले र श्रेष्ठ मन्त्री नभए उनीहरूले सिफारिस गरेका सांसद मन्त्री बन्नेछन् ।
सरकारमा पार्टीको तर्फबाट कसले नेतृत्व गर्ने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । “नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुंगो भने लागिसकेको छैन । वेदुराम भुसाल या मुकुन्द न्यौपाने कमरेडमध्ये एकजनाले गर्ने सम्भावना छ,” ती नेताले भने ।
सेतीको टिकटक काण्ड : भैंसी चराउँदै गरेका गोठाला दाइले खोले रहस्य (भिडियो हेर्नुहोस्)
सर्वोच्चले माग्यो झलनाथ खनाललाई उपचार खर्च दिनुको कारण
October 10, 2021 October 11, 2021 Butwal 24 News
एमालेले दिँदैछ यस्तो निर्णय, दशैं अगावै ठूलै राजनीतिक भूकम्पको खतरा ?